Daawo Wax ka baro Qaababka foorarka dumarka loogu tago | shumis.net
Home » galmada » Daawo Wax ka baro Qaababka foorarka dumarka loogu tago
Daawo Wax ka baro Qaababka foorarka dumarka loogu tago
Foorarka ama foorarinta dumarka xiliga galmada raaxo badan ma laga helaa?
Runtii haweenka dhamaantooda kama helaan galmada foorarka ee keliya qaar baa jecel, naagaha ka kacsado gudaha siilka ayaa si fiican macaan uga helo jilbajabsiga ama suulqabsiga.
Foorarka saxa ah waxaa weeye gabadha inay sariirta ama salootada ku jilbajabsato moxogeedana iyo dabadeeda kor u taagto caloosheedana hoos u dhigto, markaas waxaa si fiican u soo muuqanaya cambarkeeda, ninka wuxuu ka soo joogsanayaa gadaal markaas ayuu aayar u galinayaa guskiisa duleelka siilka.
Haddii uu yahay nin bahal dheer leh si fiican ayay u dareemaysaa inuu wax dheer u galay gudaha, naagaha gaaban oo gadaal u weyn ayaa u adkaysan karo bahalka dheer, naagaha dheer oo caatada ah, bahalkooda waa gaw, marka ninka madaxa galiyo way dareemaan.
Qaabka labaaad waa naagta inay dhulka istaagto oo marka ay suulasha qabsato xaaladan waxaa haboon ninka iyo naagta inay dhererka jin yihiin, haddii kale ninka lugaha ayuu ka daalayaa. laakin marka ay siman yihiin si fiican ayuu ugu raaxaysanayaa foorarka dumarka, haweenka marka ay suulka qabsadaan sidoo kale geedkooda ayaa soo muuqada gadaal ayaa laga arkaa, waxaa kaloo jirta naagta marka ay caajis badan tahay kuma fiicna foorarinta.
Title: Daawo Wax ka baro Qaababka foorarka dumarka loogu tago
Posted by galmada Net, Published at April 21, 2016 and have 0 comments